Maraykanka oo hubkiisa kala baxaya Sucuudiga iyo walwal soo wajahay Sucuudga - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Maraykanka oo hubkiisa kala baxaya Sucuudiga iyo walwal soo wajahay Sucuudga
Sida uu qorey wargeys ka soo baxa dalkaasi Maraykanka oo soo xigtey masuuliyiin ka tirsan dawlada dalkaasi ayaa sheegay in Maraykanku kala baxayo Sucuudiga hubkiisa lidka diyaarada iyo ciidamada ka jooga halkaasi. Maraykanka ayaa ciidankiisa geeyay halkaasi muddo laga joogo 50 sanno.
Waxa intaas ka horeeyay heshiis ku salaysan saliida dalkaasi oo soo bilowdey 75 sano kahor. Saliida Sucuudiga ayaa waxa inta badan soo saaray shirkado Maraykana oo markii dambe ay iibsadeen Sucuudigu.
Maxaa Keenay isbedelka xilli labaduba dagaal kula jiraan Iiraan
Waxa Maraykanku ku fashilmey baqdin awgeed inuu fooda geliyo Iiraan inkastoo wahaabiyada Sucuudigu rabaan inuu u dagaalamo, waxase xagjir Taram ka cadhaysiiyay dagaal saliideed oo Sucuudigu ku qaaday Ruushka laakiin hilfaga u qaaday saliida madow ee bugta ah ee Maraykanka.
Taram ayaa codsaday in Sucuudigu dhimo wax soo saarka saliida waxase Maxamed Salmaan ku adkeystey inuu weerar ku yahay Ruushka. Wasiirada Taram ayaa ku hanjabay inay cashuur ku soo rogi doonaan saliida Sucuudiga ama diidi doonaan inay timaad dekedaha dalkaas.
Si kastaba ha ahaatee burburka saliida madow ee Maraykanka ayaa ku qasabtey xagjir Taram inuu la soo baxo ciidankiisa iyo hubka lidka diyaaradaha ee loogu talogalay in Iiraan looga difaaco.
Taram ayaa sidoo kale u sheegay Sucuudiga inuu qaadi doono talaabooyin kale oo hilfaha u qaada boqoryooyada xaaraanta ah ee Sucuudiga ee kursiga ay Ku hayaan Maraykanka iyo Yuhuuda. Ciidanka Maraykanka ee jooga Sucuudiga ayaa qayb weyn ka ah dagaalka wahaabiyadu ka wado Yaman.
Waxase la dhowraa in Maraykanku ka dhabeeyo la bixida hubkaas iyo talaabooyinka xiga ee uu qaado. Sucuudiga waxa u furan inuu u baryo tago Ruushka oo uu caayi jirey sanado badan kulana jirey dagaal si uu isku badbaadiyo.